I-China Wall mounted (desktop) eyewash Factory, Umhlinzeki we-eyewash Wall odongeni
I-BH33-1011L udonga olufakwe ukugeza iso, okuluhlaza）
l Ukugeza: Donsela phansi isigwedlo, futhi amanzi eshawa azofuthwa kusuka kubhavu wokugeza kungakapheli umzuzwana owodwa, futhi isilinganiso sokugeleza kweshawa ngu-120-180L / min. l Ukugeza iso: Phusha uvule isibambo, i-erosol eyewash ifafazwa kungakapheli umzuzwana owodwa, ukuphakama ne-engeli yamanzi kuklanywe ngokulingana nobuso bomuntu, futhi ukugeleza kwe-eyewash kungu-12-18L / min. Ingcindezi yamanzi esesizeni idinga ukufinyelela ku-0.25-0.4MPA. l Umhlangano wokugeza i-lEye: Wakhiwe izingxenye zokulingisa ezingama-304. Indololwane engu-90-degree ...
I-BH35-1011 udonga olufakwe ukugeza iso, Okuphuzi）
l Ukugeza: Donsela phansi isigwedlo, futhi amanzi eshawa azofuthwa kusuka kubhavu wokugeza kungakapheli umzuzwana owodwa, futhi isilinganiso sokugeleza kweshawa ngu-120-180L / min. l Ukugeza iso: Phusha uvule isibambo, i-erosol eyewash ifafazwa kungakapheli umzuzwana owodwa, ukuphakama ne-engeli yamanzi kuklanywe ngokulingana nobuso bomuntu, futhi ukugeleza kwe-eyewash kungu-12-18L / min. Ingcindezi yamanzi esesizeni idinga ukufinyelela ku-0.25-0.4MPA. l lEye wash strainer: high-density PP + 304 double-layer strainer, okungaba filte ...
I-BH35-1011L udonga olufakwe ukugeza iso, okuluhlaza）
l Ukugeza: Donsela phansi isigwedlo, futhi amanzi eshawa azofuthwa kusuka kubhavu wokugeza kungakapheli umzuzwana owodwa, futhi isilinganiso sokugeleza kweshawa ngu-120-180L / min. l Ukugeza iso: Phusha uvule isibambo, i-erosol eyewash ifafazwa kungakapheli umzuzwana owodwa, ukuphakama ne-engeli yamanzi kuklanywe ngokulingana nobuso bomuntu, futhi ukugeleza kwe-eyewash kungu-12-18L / min. Ingcindezi yamanzi esesizeni idinga ukufinyelela ku-0.25-0.4MPA. l lEye wash strainer: high-density PP + 304 double-layer strainer, okungaba filt ...
I-BH33-1011 udonga olufakwe ukugeza iso, Okuphuzi）
Udonga lwe-BH38-1010 lufake ukugeza kwamehlo okuzenzakalelayo
Udonga lwe-BH38-1009 lufake ukugeza iso okuzenzakalelayo
I-BH35-2011 indishi yokuxhuma emhlophe yokugeza iso
Udonga lwe-BH35-1009 lubekwe ukugeza iso
Udonga lwe-BH33-1010 lubekwe ukugeza iso
l Ukugeza: Donsela phansi isigwedlo, futhi amanzi eshawa azofuthwa kusuka kubhavu wokugeza kungakapheli umzuzwana owodwa, futhi isilinganiso sokugeleza kweshawa ngu-120-180L / min. l Ukugeza iso: Phusha uvule isibambo, i-erosol eyewash ifafazwa kungakapheli umzuzwana owodwa, ukuphakama ne-engeli yamanzi kuklanywe ngokulingana nobuso bomuntu, futhi ukugeleza kwe-eyewash kungu-12-18L / min. Ingcindezi yamanzi esesizeni idinga ukufinyelela ku-0.25-0.4MPA. l lBall valve: I-two-piece ball valve ingenza ukugeleza kwamanzi kwe-eyewash ...
udonga lufakwe ukugeza iso / ubuso
Imodeli eyisisekelo: I-BH33-1010 (304)
izici ezinhle kakhulu:impahla eyi-304 yensimbi engagqwali, equkethe i-nickel engaphezu kuka-8. Ukumisa Standard, kungavimbela acid, alikhali, usawoti kanye nezinye izinto ezonakalisayo. Ezomnotho. Udonga olufakwe endaweni yokusebenza aluthathi isikhala.
impahla: umzimba omkhulu 304 insimbi engagqwali 3, idivayisi yokugeza: cha.